Yiyiphi iSicwangciso seNyanga seSET elula kakhulu?
Ukuphuculwa kweenjini zokusesha (okanye i-SEO) akusisisigxina esisodwa, kodwa inkqubo eqhubekayo idinga ukubeka iliso rhoqo nokulungisa. Ingaba uyayithanda okanye ayifuni, iinjongo zophando zihlala ziguqula izilungiso zazo. I-Google, umzekelo, uhlaziye ngokuqhubekayo ubuchule balo ukuze unikeze iziphumo ezixabisekileyo kunabathengi.
Ngenxa yoko, abo banini bezoshishino abaye baqalisa iiwebhusayithi zabo basenemisebenzi ehlobene ne-SEO ukwenza rhoqo. Khumbula, ukugcina isayithi yakho kuze kube yiminyaka kwaye ikwabekwa kakhulu yiGoogle kufuneka uqhube umsebenzi we-SEO wokulungisa inyanga nganye ngenyanga. Yilapho iprogram yenyanga ye-SEO ifika - lost super online.
Namhla, siya kubonisa zonke iimfihlelo zokugcina izixhobo zakho ezilungiselelwe kakuhle kwimpumelelo eqhubekayo kunye neendawo zakho zokukhangela injini.Ulungele? Masiqalise.
Isicwangciso sakho seNkqubo yesiNyanga se-SEO
Esinye sezizathu eziphambili zokuba ufanele ugcine isibonelelo sakho ngokusesikweni kukuba indawo yakho yinto ebizwa ngokuba yintengiso kwishishini lakho elinakho ukuthatha nokugcina ingqwalasela yabantu abaninzi. Nazi izicwangciso ezilula ukuba ulandele ukunceda iwebhusayithi yakho ihlale phambi komdlalo.
Amagama abalulekileyo okujoliswe kuwo
Kufuneka ujolise amagama amatsha amagama nganye ngenyanga. Okokuqala, khangela igama eliphambili lokuncintisana elincinci elingagqithanga ngaphezu kwe-500 ukusesha ngenyanga. Emva koko, jolise igama elingundoqo kumxholo owenzayo kwinyanga leyo. Iingcali ze-Semalt zincoma ukuba usebenzise i-Google Adwords yegama elingundoqo elingundoqo ukuze ufumane amagama angundoqo afanelekileyo. Kwakhona, ungalibali ukuchofoza "ngqo" ukunciphisa iziphumo phantsi. Elula njengoko.
Ukuvelisa okuKhuselweyo kunye nexabiso elixabisekileyo
Ngokukhawuleza xa ugqibelele "kwii-keywords zenyanga," isinyathelo esilandelayo kukudala umxholo ojolise kula magama. Asikho isidingo sokukhathazeka ukuba awunayo ixesha elaneleyo lokudala umxholo omtsha kwinyanga enikeziweyo - unokuhlala uqesha ama-freelancers okanye abachwephesha bezakhono abaza kwenza loo msebenzi kuwe. Enye indlela yokuphuma kwimeko kukuba ukhethe iphepha elisekhoyo lekopi efanelekileyo kwaye uyihlele ukufaka igama elingundoqo kumxholo. Sekunjalo, ukuba unako ukuvelisa umxholo omtsha rhoqo, bhetele wenze njalo: bhala amanqaku amasha, izithuba zeblogi, amaphepha amhlophe, uphando lweefowuni, ii-blogs zezivakashi okanye omnye umxholo oza kuzisa ezinye izithuthi kunye nenqanaba eliphezulu kwigama elingundoqo.
Nika i-Multimedia ithuba
Awukathumeli nayiphi na ividiyo okanye ii-podcasts? Ukuba akunjalo, ke ungcono ukuqala umendo onjalo ngokukhawuleza. Yenza ividiyo eyodwa yenyanga nganye ngenyanga. Xa ubhala iskripthi sevidiyo, qinisekisa ukuba iquka zombini amagama angundoqo kunye neekhowudi. Ngokufanayo kunye namaqaku, qi niseka ukwenza umxholo wevidiyo ufanele kwaye unomdla kumbukeli - sebenzisa iziganeko zangoku, izikhokelo zinyathelo-nge-nyathelo, ukuhlaziywa kunye namanye amacebo athile owaziyo aya kufumana abaphulaphuli bakho abajoliswe kuyo.
Inyaniso kukuba i-Intanethi isoloko ishintsha kwaye iguquke - ngoko ke kufuneka uvimba wakho kufuneka. Ukunamathela kwiingcebiso ze-SEO ezikhankanywe ngasentla kuya kukufundisa okuninzi malunga nomxholo osebenza kakuhle kwiwebhusayithi yakho. Sebenzisa olo lwazi ukuphucula umxholo okhoyo ongathanda ukubona ukunyuka kumaqela eenkcukacha eziphambili. Ukuhambelana nesi sicwangciso senyanga se-SEO kuya kunceda ukugcina umxholo wakho uphelele kwaye ubekwe phezulu xa ukhuthaza ukubandakanywa komsebenzisi kunye newebhusayithi yakho.